Voadika ny 23 Aogositra 2010 9:40 GMT
Iray amin'ny vokatry ny faharetan'ny krizy politika eto Madagasikara ny fiantraikan'ny sazy mihatra amin'ny tontolo iainana, indrindra fa amin'ny ala voajanahary noho ny vola betsaka azo noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena (bolabola). Ny fiasana miaraka eo amin'ny mpikatroka manampahaizana manokana momba ny fiarovana sy ny fitahirizana ny tontolo iainana sy ireo fikambanana mifofotra ho amin'ny mangarahara miady amin'ny kolikoly no nahafahana nanangom-baovao momba ity heloka bevava atao amin'ny tontolo iainana ity. Ny fanadihadiana nataon'ny sampan-draharaha mahaleo tena misahana ny tontolo iainana isan-karazany no nahafantarana fa mitentina $460.000 Amerikana ny andramena (bolabola) voatrandraka isan'andro. Voalazan'ny tatitra ihany koa fa eken'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara ity fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena ity noho ny fanomezany alalana ny fitaterana kontainera misy ny andramena. Nihoatra ny roa taona no nanatontosana ny fanadihadiana izay natomboka fony mbola ny teo aloha no nitantana ny firenena. Mbola vao amam-bolana kosa vao nalaza ny momba ity lohahevitra iray ity rehefa misy ny adihevitra politika, ny filazan'ny gazety sy haino aman-jery malagasy noho ny porofo tsy azo lavina navoakan'ny sampan-draharaha voatonona etsy ambony.
Ny anjara asan'ny Teknolojia vaovao sy ny sandam-pandaniana nandritra ny famotorana:
Nanazava i Rhett Butler fa tsy ny fanangonana porofo ihany no ilana ny ekipa fa ny fanairana amin'ny alalan'ny vaovaon-gazety sy ny valan-tserasera ihany koa:
Toerana lavitra ho an'izao tontolo izao i Madagasikara ary na ny ala voanjanahary aza dia toeran-davitra ihany koa ho an'ny Malagasy monina eto an-drenivohitra. Saingy tsy ny halavirana kosa no olana ho an'i Reiner Tegtmeyer fa ny tsy fisian'ny finiavana politika hisorohana ny fikapana hazo tsy manara-dalàna:
Ny fanamby goavana dia ny fandravana ny firaisana tsikombakomba eo amin'ny mpitondra fanjakana, ary singanina amin'izany araka ny resaka mandeha ny praiminisitra, sy ireo deban'ny fitrandrahana hazo any amin'ny faritra SAVA. Vokatr'izany dia manome alalana hanondranana hazo sarobidy “manokana ” (exceptionnel) ho an'ireo debadeban'ny fanondranana hazo ao amin'ny faritra SAVA izay fantatra fa hazo nokapaina tsy manara-dalàna hatrany ny governemanta. Saingy eo ihany koa ny tsy fananam-bola mialoalo amin'ny fitondrana vonjimaika noho ny sazy mihatra amin'ny firenena ka mahatery azy ireo hitady vola amin'ny fomba rehetra. Fanamby hafa ankoatra izany ihany koa ny tsy fahampian'ny olona sy ny tahiry ary ny fampitaovana amin'ny fitantanana ny sampandraharahan'ny valan-javaboarim-pirenena sy ny sampandraharaham-paritra misahana ny rano sy ny ala ka lasa tsy maharaka sy tsy mahomby loatra ny fanarahamaso. Mamaha olana amin'ny ampahany ihany ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana saingy tsy vahaolana maharitra velively izany. Ankoatra izany, manimba ny fanenjehana ireo mpandika lalàna ihany koa ny firaisana tsikombakomba amin'ireo zandary sasantsasany.
Ny anay ato amin'ny Global Witness dia tsy ho an'ny sarambambem-bahoaka loatra ny asanay mampiharihary ny asa manakolikoly amin'ny fitrandrahana ny loharanon-karena voajanahary sy amin'ny rafitry ny varotra iraisam-pirenena, ny loharanon-karena miteraka ady ary ny fanosihosena ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana, fa mitodika amin'ireo mpanapa-kevitra politika isam-pirenena sy iraisam-pirenena ary amin'ny Fiaraha-monina iraisam-pirenena izay liana na tafiditra amin'ny politika na manohana ny fitrandrahana ny loharanon-karena voajanahary amin'ny ankapobeny.
Soratra miverina: Fiarovana ny Ala Afrikana: Lova Navelan’i Wangari Maathai · Global Voices teny Malagasy
[…] tsy ara-dalàna ity hatramin'ny nipoahan'ny krizy 2009, araka izay efa voalaza mialoha ato anatin'itony tafatafa itony sy ity tatitra […]
28 Septambra 2011, 13:20
Soratra miverina: Tolo-Tanan’i Frantsa Sy Ny Banky Mondialy Hanampy Ny Firenena Afrikana Hahay Hifampiraharaha Amin’ny Harena An-kibon’ny Taniny · Global Voices teny Malagasy
[…] Shina eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana loharanon-karena voanjanahary, indrindra fa ny fanondranana bolabola tsy ara-dalàna [mg]. Saingy ny nataon'i Frantsa teto Madagasikara nandritra ny krizy politika 2009 no […]
10 Oktobra 2012, 19:17